I-Barnfind yokubonisa i-All-in-One yayo ye-12G-SDI ne-HDMI ye-2.0 Fiber Transport BTF1-41 Frame ne-Future Future-Proof ukusebenza ku-IBC 2019 - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Barnfind yokubonisa i-X -UMXG-SDI ne-HDMI ye-12 Fiber Transport BTF2.0-1 Frame ne-Future Future-Proof ukusebenza ku-IBC 41
I-Barnfind ukukhombisa i-All-In-One yayo I-12G-SDI & I-HDMI I-2.0 Fiber Transport I-BTF1-41 Frame ne-Future Future-Proof ukusebenza ku-IBC 2019
Ukunikezwa kobude obude obude bokuhamba kwezokuthutha, ukuhlelwa, ukusabalalisa nokuguqulwa kwiphakheji elilodwa elihle manje linikeza isikhombimsebenzisi se-BNC-32 esikhethwayo ukuhlinzeka isikhombikubona kagesi
Sandefjord, Norway - (July 11, 2019) - I-Barnfind Technologies, umholi waphesheya kwezisombululo zokuhambisa i-fiber, uzoqokomisa uhlaka lwayo oludumile lwe-BTF1-41, olwethulwe emhlabeni wonke ku-IBC2018, nge-BNC-32 mid-board yokuzikhethela eletha ukusebenza okungeziwe kobufakazi besikhathi esizayo kwiyunithi esezingeni eliphezulu yenkampani kuze kube manje.
The BTF1-41 ifreyimu, enika amandla ochwepheshe kwezobunjiniyela nokukhiqiza ukunqoba kalula imikhawulo yebanga ngokuhlanganisa ukuguqulwa kusuka ethuneni kuye kufibrethi futhi kubuyela ithusi ngokusatshalaliswa kanye nokujikeleza kwezimpawu ze-32 + kwiphakeji ye-1 RU, kuzokhonjiswa ngebhodi le-BNC-32 yangaphakathi ongakukhetha abasebenzisi ngokuguquguquka okungaphezulu kwesibonisi sikagesi.
"Asikwazanga ukujabulisa kakhulu ukuletha iBFT1-41 Frame yethu yokuguqula umdlalo emuva ku-IBC ngezici eziningi nokusebenza okuphambili," kusho uWiggo Evensen, umphathi weBarnfind. "I-BTF1-41 iyunithi yethu ethuthukisiwe kakhulu kuze kube yimanje, owokuqala ochungechungeni lwe-BarnOne enekhono le-multi-format 12G elifaka futhi I-HDMI Ukusebenza kwe-2.0, kodwa manje kuzokwenzela izilaleli ezikhudlwana nangendlela yokufaka isikhombimsebenzisi se-mini-BNC. Sijabule ukukubonisa eceleni kwamanye amafomu ethu kanye nama-SPF, amamojula e-BarnMini nama-StageBoxes. "
Barnfind's isixazululo sokuthutha isekela noma iyiphi protocol yedijithali, kungaba ngekagesi noma lemehlo. Ispredishithi eyinkimbinkimbi futhi ehlanganisiwe iqeda isidingo sokuqasha ikamelo elibi futhi elibi ngokuvumela izibonakaliso ze-36 ezihamba ngefayibha eyodwa ye-mode ehamba ngamakhilomitha kuya ku-80km (50 miles). Ukungezwa kwakamuva kokuxhaswa kwe-Ember + control protocol kuphothifoliyo ebanzi yenkampani yabathengisi bezokuphatha kuzobonisa ukuguquguquka nokwelula ikhono lesisombululo lokulawulwa amapulatifomu wesithathu.
I-BTF1-41 Frame manje ene-optional BNC-32 Mid-Board - ishintsho semidlalo ngenethiwekhi yemisebenzi
Barnfind's BTF1-41 Uhlaka lufaka ubuchwepheshe obuzayo bokubhekana nezakhiwo ezivelayo ezifana ne-4K, I-HDMI I-2.0 ne-IP, kepha futhi isekela onke amafomethi wefa (kufaka phakathi ividiyo ye-analog) evumela abaklami besikhungo kanye nonjiniyela bokukhiqiza ukuthi basebenzise ubuchwepheshe obusha nobuvuthiwe ngaphandle komthungo futhi ngaphandle kokulinganiselwa kwebanga. Imiphumela iyinhlangano yesikhulumi sokuthutha i-fibre ye-fibre ye-multi-functional, yesignal neutral evuleka amandla okuklama uhlelo ngenkathi evumela ukubuyiswa kabusha kwesistimu ekuhambeni.
I-BTF1-41 ikhula nesikhungo njengoba izidingo zaso ziguquka. Iyunithi ifaka i-36 x 36 router futhi ifakwe slot yekhadi elixhunyaniswe nomzila we-16 x 16 owenza ukuthi isebenze izinhlelo zokusebenza ezengeziwe ngamakhono amaningi. Ukusebenza okuthuthukisiwe okutholakalayo manje, noma okuhleliwe ukuqaliswa esikhathini esizayo esiseduze, kufaka ukuguqulwa kwe-up & phansi, ukuguqulwa kwe-A / V, ukucindezelwa, nokusekelwa kwababukeli abaningi.
I-New for IBC iyindlela yokuzikhethela ye-BNC-32 Mid Board ekhethiwe ye-Frame's slot ephakathi evumela ukuthi ubuchwepheshe bomthengisi wesithathu buhlanganiswe epulatifomu, buqinisekisa ubude bayo. Ukusebenza kuthuthukiswa ngaso sonke isikhathi okwenza kuhambisane nokuthungatha. Leli khadi elisha lizonikeza umsebenzisi i-interface kagesi - ephezulu ye-mini-BNC - esiguquli sesiphambano. Iphakathi nendawo ibonisa izimpendulo ze-16 nemiphumela. Amandla ayo we-multirange avumela ukuvela kwesiginali kusuka kumanani aphansi aze afike ku-12 Gbps. Ukusebenza okwengeziwe kungalawulwa futhi kubhekwe yisoftware yeBarnStudio, noma ezinye izinhlelo eziningi zokulawula.
I-multi-range / format-multi BTF1-41 iyakwazi ukusebenza nge-12G, ifaka phakathi i-GPIO, Tally kanye ne-UMD eyakhelwe ngaphakathi. Ifreyimu ifaka I-BarnStudio, Isofthiwe yokulawula ye-Barnfind, futhi inikeza nokulawula okufanayo okuguquguqukayo kwesithathu njengoba kukhona I-BarnOne Uhlelo lwe-3G.
Ngokungeziwe ku-BTF1-41 Uzimele weBarnfind uzobe ekhombisa amanye amayunithi kusuka ebangeni leBarnOne kufaka phakathi i-BTF1-10AA enikezela ukufakwa komsindo we-8x analog audio kanye nokukhipha okuguquliselwe ku / kusuka ku-MADI.
I-BarnMini-22 iyimodeli entsha ye-BarnMini nokwandiswa kochungechunge. Le yunithi entsha ilandela ezinyathelweni zeBarnMini-02 eyaziwayo neBarnMini-12, amamodeli amabili amukelwe ngamakhasimende afunayo emhlabeni wonke ngezinkulungwane. I-BarnMini-22 inikeza ukuphathwa okugcwele okuzakhelwe kwabaqaphi kanye nokulawula isignali nge-BarnStudio futhi ikwazi ukusekela noma yiziphi izimpawu kuze kufike ku-12G. U-Barnfind ungomunye wabakhiqizi abambalwa abahlinzeka ngeyunithi encane nge-2 x SFP yokuguqulwa kwesignali ye-protocol agnostic. I-BarnMini-22 iphelele kwezicelo eziningi, ikakhulukazi amakhamera wokuqapha we-CCTV / aphezulu.
Umkhiqizi izophinde ikhombise amamojula amaningi weBarnMini kufaka phakathi i iBarnMini-05 ethuthukile elungele ama-OB vans, izindiza ezindiza izindiza enophephela emhlane.
Isistimu kaBarnfind's HiLo SFP ye-36-Channel CWDM izokhonjiswa ukukhombisa amandla eNkampani ahlukile okuhlangabezana nesidingo sobuningi bezinsimbi eziphakeme ku-fiber eyodwa. Ngokusebenzisa uhhafu wesikhala esikhaleni ngasinye sebanga le-CWDM, ama-HiLo SFPs angaphindisela kabili umthamo wokudlulisela ohlangothini lwe-CWDM we-bi-mwelekeo.
Barnfind Americas I-Barnfind Technologies I-BarnMini BTF1-41 I-Cobalt Encoder I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-IBC I-IBC2019 I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC	2019-07-19
Ngaphambilini: I-Megahertz yokubonisa i-One-of-Kind, I-All OB IP iloli ku-IBC 2019
Olandelayo: Umlingisi Wefilimu Nengxenye Yomcimbi